ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိစ္စ Credential ကော်မတီက ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ ရလဒ်ကိုတော့ ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တာဝန်ရှိသူတဦးက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါသလဲ၊ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“လက်ရှိကတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ တာဝန်ခန့်အပ်ဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ Credential Committee ကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းက ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို ဆက်လက်တင်ပြအတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့တောင်းဆိုသလို NUG ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့အဆင့်ထိ မရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အခြေအနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ရှိခြင်းကိုယ်တိုင်က ကြိုဆိုပါတယ်၊ သဘောကျပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့အသံနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်၊ နောက်တခါ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာ တကယ်ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ အရေးဆို ပြောဆိုတင်ပြချက်တွေ ပြုလုပ်ဖို့က အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီ တရုတ်သံအမတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အာဆီယံ သံအမတ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးတာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ၊ အရေးယူလုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတော့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းအရ ပိုပြီးတော့ သံခင်းတမန်ခင်းအရ ပြောနိုင်ဖို့အတွက် အင်အားသက်ရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် NUG ကို တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်၊ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အဆင့်အထိတော့ မရောက်သေးဘူး၊ ဒါကတော့ ကျနော် ဆက်ပြီး ကြိုးစားရမှာ။ ဒိထက်ပိုပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။. ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီတော့ အခု ဒီ လက်ရှိ Credential Committee လို့ ခေါ်တဲ့ ကုလအရည်အချင်းစစ် ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ အဓိက ထူးခြားတာဆို ဘာကို ထောက်ပြမလဲ။
ဦးအောင်မျိုးမင်း။. ။ စစ်ကောင်စီက စစ်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက် ကြိုးစားမှု မအောင်မြင်သေးတာသေချာတယ်။ သာမန်အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေမှာ အမြဲတမ်း ဟိုဘက် ဒီဘက်ပေါ့နော်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တခြားသော စစ်ကောင်စီဘက်ကိုယိမ်းတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာရှိလို့ရှိရင် တခါတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်က ကျလေ့မရှိပါဘူး။ သိပ်ပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ဟာမျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့သတိထားပြီးတော့ စောင့်ကြည့်ရတာတော့ တရုတ်နဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခါအခုမှာတော့ Credential Committee ထဲမှာကိုယ်တိုင်က တရုတ်နဲ့ရုရှားကပါနေတယ်။ သူတို့ကနေ သဘောတူထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေညီလာခံမှာ ဆက်လက် တင်ရင် သိပ်ပြီးတော့ အငြင်းအခုန်ပုံစံမျိုး မရှိတော့ဘဲနဲ့ အစောကြီးကတည်းက သဘောတူထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာကတော့ ထူးခြားချက်လေး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုဝင်းမင်း။. ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဦးအောင်မျိုးမင်း။ ဘာကြောင့် အခုလို တရုတ်နဲ့ရုရှားက ထူးထူးခြားခြားသဘောတူတယ်လို့ထင်လဲ။
ဦးအောင်မျိုးမင်း။ ။ ဒီအချိန်မှာ တရုတ်နဲ့ရုရှားက လက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကို ငြင်းဆိုလို့မရတာ၊ အကာအကွယ်ပေးလို့မရတာ အထင်အရှားပါပဲ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေမှာရော ပြီးခဲ့တဲ့အထွေထွေညီလာခံမှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာကော၊ လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေတယ်။ နိုင်ငံတကာကနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုအဆင့်ထိကို ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အပါအဝင် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ၊ အထူးသဖြင့် တခါမှတောင် ဒီလိုမျိုးမပြောဖူးတဲ့ အာဆီယံမှာကအစ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်လာပြီဆိုတာကို ပြောလာတဲ့အတွက် နောက်တခု- ဒီတခါမှာ ပိုအားကောင်းတာကတော့ ဦးကျော်မိုးထွန်းက NUG ဘက်ကို ရပ်တည်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဟာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့က ဒါကို သိပ်ပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မလုပ်ဆောင်လိုတဲ့ ဆန္ဒမျိုးရှိတယ်။ တက္ဘာလုံးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့် အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကို စိုးရိမ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့က နိုင်ငံတကာမှာတော့ လျှော့ပေးလိုက်မယ်၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားမှာ ဟိုမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ သူတို့နဲ့ ကြားထဲမှာ အကျိုးတူလုပ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စပိုင်းမှာတော့ ဆက်သွားနေတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။. ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဦးအောင်မျိးမင်းခင်ဗျား။
ကုလသမဂ်ဂမှာ မွနျမာကိုယျစားပွုမှုဆိုငျရာ ထှကျပျေါရလဒျ NUG ကွိုဆို
ကုလသမဂ်ဂမှာ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွုမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့ကိစ်စ Credential ကျောမတီက ရှဆေို့ငျးလိုကျပမေယျ့ တကယျ့လကျတှေ့ ရလဒျကိုတော့ ကွိုဆိုတဲ့အကွောငျး ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ NUG တာဝနျရှိသူတဦးက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး နောကျထပျ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာနိုငျခွရှေိပါသလဲ၊ NUG လူ့အခှငျ့အရေးဝနျကွီး ဦးအောငျမြိုးမငျးကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
“လကျရှိကတော့ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဦးကြျောမိုးထှနျးကိုပဲ ဆကျလကျပွီးတော့ တာဝနျခနျ့အပျဖို့ သူတို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ Credential Committee ကနေ ထုတျပွနျလိုကျတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့လုပျထုံးလုပျနညျးက ကုလသမဂ်ဂအထှထှေညေီလာခံကို ဆကျလကျတငျပွအတညျပွုမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့တောငျးဆိုသလို NUG ကို အသိအမှတျပွုဖို့အဆငျ့ထိ မရသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျအခွအေနနေဲ့ ဆကျပွီးတော့ ရှိခွငျးကိုယျတိုငျက ကွိုဆိုပါတယျ၊ သဘောကပြါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ နိုငျငံတကာအလယျမှာ ပွညျသူတှရေဲ့အသံနဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ခံစားခကျြ၊ နောကျတခါ မွနျမာပွညျသူတှအေပျေါမှာ တကယျထိရောကျကောငျးမှနျတဲ့ အရေးဆို ပွောဆိုတငျပွခကျြတှေ ပွုလုပျဖို့က အဓိကဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ ဒီ တရုတျသံအမတျနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ အာဆီယံ သံအမတျတှနေဲ့ပဲဖွဈဖွဈ မွနျမာ့အရေးကို ဆှေးနှေးတာ၊ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာ၊ အရေးယူလုပျဆောငျမှုတှဖွေဈတဲ့အခါမှာ ပိုပွီးတော့ တရားဝငျလမျးကွောငျးအရ ပိုပွီးတော့ သံခငျးတမနျခငျးအရ ပွောနိုငျဖို့အတှကျ အငျအားသကျရောကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ NUG ကို တရားဝငျအစိုးရအဖွဈ၊ တရားဝငျအသိအမှတျပွုတဲ့ အဆငျ့အထိတော့ မရောကျသေးဘူး၊ ဒါကတော့ ကနြျော ဆကျပွီး ကွိုးစားရမှာ။ ဒိထကျပိုပွီး ကွိုးစားလုပျဆောငျဖို့တော့ လိုအပျပါသေးတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။. ။ ဟုတျကဲ့၊ အဲဒီတော့ အခု ဒီ လကျရှိ Credential Committee လို့ ချေါတဲ့ ကုလအရညျအခငျြးစဈ ကျောမတီဆုံးဖွတျခကျြရဲ့ အဓိက ထူးခွားတာဆို ဘာကို ထောကျပွမလဲ။
ဦးအောငျမြိုးမငျး။. ။ စဈကောငျစီက စဈအစိုးရအဖွဈ အသိအမှတျပွုဖို့အတှကျ ကွိုးစားမှု မအောငျမွငျသေးတာသခြောတယျ။ သာမနျအနအေထားအရဆိုလို့ရှိရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ကိစ်စတှမှော အမွဲတမျး ဟိုဘကျ ဒီဘကျပေါ့နျော။ ဒီမိုကရစေီနဲ့ တခွားသော စဈကောငျစီဘကျကိုယိမျးတဲ့ နိုငျငံတှကွေားထဲမှာရှိလို့ရှိရငျ တခါတညျး ဆုံးဖွတျခကျြက ကလြမေ့ရှိပါဘူး။ သိပျပွီးတော့ ပွငျးထနျတဲ့ဟာမြိုးတှေ မဖွဈနိုငျဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ကနြျောတို့သတိထားပွီးတော့ စောငျ့ကွညျ့ရတာတော့ တရုတျနဲ့ရုရှားလိုနိုငျငံတှပေေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခါအခုမှာတော့ Credential Committee ထဲမှာကိုယျတိုငျက တရုတျနဲ့ရုရှားကပါနတေယျ။ သူတို့ကနေ သဘောတူထားတဲ့အနအေထားမြိုးဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့အထှထှေညေီလာခံမှာ ဆကျလကျ တငျရငျ သိပျပွီးတော့ အငွငျးအခုနျပုံစံမြိုး မရှိတော့ဘဲနဲ့ အစောကွီးကတညျးက သဘောတူထားတဲ့ပုံစံဖွဈနတောကတော့ ထူးခွားခကျြလေး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ကိုဝငျးမငျး။. ။ ဟုတျကဲ့၊ ဦးအောငျမြိုးမငျး။ ဘာကွောငျ့ အခုလို တရုတျနဲ့ရုရှားက ထူးထူးခွားခွားသဘောတူတယျလို့ထငျလဲ။
ဦးအောငျမြိုးမငျး။ ။ ဒီအခြိနျမှာ တရုတျနဲ့ရုရှားက လကျရှိမှာဖွဈပကျြနတေဲ့ စဈကောငျစီရဲ့ကြူးလှနျနတေဲ့ရာဇဝတျမှုတှကေို ငွငျးဆိုလို့မရတာ၊ အကာအကှယျပေးလို့မရတာ အထငျအရှားပါပဲ။ ဟိုးအရငျကတညျးက ကုလသမဂ်ဂရဲ့ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ ဆှေးနှေးတဲ့အခကျြတှမှောရော ပွီးခဲ့တဲ့အထှထှေညေီလာခံမှာ ခမြှတျခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှမှောကော၊ လယျပွငျမှာဆငျသှားသလို ထငျရှားနတေယျ။ နိုငျငံတကာကနေ သတျမှတျထားတဲ့ ရာဇဝတျမှုအဆငျ့ထိကို ရောကျရှိနပွေီဆိုတာကို ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျအပါအဝငျ ကနျြတဲ့နိုငျငံတှရေဲ့ ပွောဆိုခကျြတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ တခါမှတောငျ ဒီလိုမြိုးမပွောဖူးတဲ့ အာဆီယံမှာကအစ ဒသေတှငျးလုံခွုံရေးကို ထိခိုကျလာပွီဆိုတာကို ပွောလာတဲ့အတှကျ နောကျတခု- ဒီတခါမှာ ပိုအားကောငျးတာကတော့ ဦးကြျောမိုးထှနျးက NUG ဘကျကို ရပျတညျပွီးတော့ ပွညျသူလူထုနဲ့တသားတညျး ရပျတညျခဲ့တဲ့ဟာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မို့လို့ သူတို့က ဒါကို သိပျပွီးတော့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ မလုပျဆောငျလိုတဲ့ ဆန်ဒမြိုးရှိတယျ။ တက်ဘာလုံးနဲ့ ထိပျတိုကျတှမေ့ယျ့ အနအေထားမြိုးဖွဈနိုငျတဲ့ဟာကို စိုးရိမျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့အနနေဲ့က နိုငျငံတကာမှာတော့ လြှော့ပေးလိုကျမယျ၊ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံအခငျြးခငျြးကွားမှာ ဟိုမှာ စဈကောငျစီနဲ့ သူတို့နဲ့ ကွားထဲမှာ အကြိုးတူလုပျဆောငျတဲ့ ကိစ်စပိုငျးမှာတော့ ဆကျသှားနတေဲ့အရာတှေ ရှိတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။. ။ ဟုတျကဲ့၊ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ ဦးအောငျမြိးမငျးခငျဗြား။
#MyanmarMilitaryCoup #UNCredential #voaburmese #ကုလသမဂ်ဂ #စဈအာဏာသိမျးမှု #ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး #NUG#အောငျမြိုးမငျး#ကြျောမိုးထှနျး